संवेदनाको गोदावरी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २, २०७४ कुमारी लामा
फरक दृष्टिकोण खोजिरहेको छ समय । लेखनमा पनि भिन्न शैली, प्रस्तुतिसाथै नवीन विषय पर्खिरहेका छन् पाठक । छरपस्टै छन् लेख्नुपर्ने कुराहरू । टिप्नुपर्ने विषयहरू अलपत्रै परिबसेका छन् आँखा डिलमै । हामी फेरि पनि लेख्ने कुरा या भनौँ अभिव्यक्तिको सकसमा पर्छौं । लाग्छ अब त लेख्ने कुरै पो सकिएछन् कि ।
डरलाग्दो हुँकार र उचो आवाजमा चिच्याइरहेका छन् कविहरू । आईएनजीओको विशेष नजर परेको विषय मोहमा लहसिएको भेटिन्छन् निकै उपन्यासकारहरू । किन नजरअन्दाज भइरहेको छ इतिहासको गर्तमा लुकेको फरक इतिहासका कुरा ? किन अझै लेखिन बाँकी भएका होलान् कल्पनाको उच्चतम उडानले भरिएका साइन्स फिक्सनहरू ? या किन अझै कोसौं टाढा बसिरहेका छन् लेखकहरू मानिसभित्रका अनेकन मनोभावका कुराहरूबाट ? हामी वरपरको परिवेशमा पनि हिमाल या मधेसका कुरा अझै गहिरिएर हेर्न बाँकी नै छ । अझ कति हो कति बाँकी छन् नजिकिन फरक यौनिकता भएकाहरूसँग पनि । सायद यस्तै–यस्तै केही नयाँ विषयहरू पर्खिबसेका हुन सक्छन् धेरै पाठकहरू ।
पछिल्लो समय यस्तै नयाँ विषय खट्केको बखत श्याम शाह झुल्किए मधेसका मुद्दा र त्यहाँका दारुण कथाहरू बोकी कथासंग्रह ‘अब्बा’ मार्फत । थोरै राहत पाए प्रतीक्षारत साहित्य पारखीले । लगत्तै आयो राजनीतिक सामाजिक विसंगतिको उबडखाबडलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा राजेन्द्र पराजुलीको ‘शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा’ नामक कथासंग्रह । पाठकहरूको उत्साहमा साथ दिन फरक विषय र भिन्न शैलीका साथ कथासंग्रह ‘कठपुतला’ लिएर आएकी छन् अर्चना थापा । पछिल्ला समय आएका सशक्त कथासंग्रहहरूले अब नेपाली साहित्यमा फेरि कथाको समय फर्किआएको संकेत दिन्छ । यही आशा भरिएको मीठो समयमा आइपुगेका छन् महेश पौड्याल ‘फुलेन गोदावरी’ कथासंग्रहका साथ ।
एक दर्शक दृष्टि पक्कै निरीह हुन्छ भर्खरै आफ्नो सन्तान गुमाएको एक पिताको मनोदशा बुझ्न । एक रमिते न हो दर्शक भन्नु त । बाहिरी आवरण मात्र त देखिन्छ रमितामा तर खाँटी कुरा त भित्र लुकेको हुन्छ, मनभित्र । महेश पौड्यालको ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ संग्रहभित्रका प्राय: कथा मानवीय संवेदनाका भित्री तहहरू छाम्न सफल छन् । यस अर्थमा उनका कथा मनका नजिक छन् । हामीलाई संवेदित पार्ने विषयहरू टिपेका छन् उनले । ती विषयहरूभित्र परेका छन् मानवीय सम्बन्ध, संवेदना, मनोविज्ञान, प्रेम, निराशा, मृत्यु साथै विस्थापनका अनेक पाटाहरू ।
आजको चलायमान समयको उपज हो बसाइसराइ या अर्को शब्दमा विस्थापन । गाउँबाट सहरमा अनि सहरबाट विदेशमा विस्थापित भइरहेका छन् धेरै नेपाली । गाउँहरू रित्तिँदै छन् । साथै खाली–खाली हुँदै छ गाउँघर कुरिबसेका रहलपहल वृद्धवृद्धाका मन पनि । कि त उडिजाने सन्तानकै पछि लाग्नुपर्‍यो नत्र एक्लो एकलासमा बिरानिएर बस्नुको विकल्प छैन उनीहरूसँग । निदाल कथाभित्रका पात्र धर्म बराल छोराकै पछि लाग्ने निधो गर्छन् । नेपालको पूर्वी पहाडी गाउँ सुलुबुडबाट बसाइ सर्दै छ धर्म बरालको परिवार । एउटा लामो पारिवारिक विरासत बोकेको घर भत्काइँदै छ । घरसँगै भत्कँदै छ कुलदेवता थान, एउटा इतिहास, त्यस घरसँग जोडिएका अनेकन सुख–दु:खको पहाड, र भत्कँदै छ मन, सायद एउटा सिङ्गो जीवन पनि । घरको छानो, भित्तो, खाबो, मटानसँगै निदाल ढलेपछि ढल्छ धर्म बरालको मन पनि । उनी अब कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी ढल्छन् । त्यो ढलाई सम्भवत: एउटा विम्ब हो विस्थापनसँगै ढल्ने र मासिने लामो इतिहासको । धर्म जस्तै–जस्तै कैयौँको मन ढलेको छ आजकल । लेखक समयको बहावलाई टपक्कै टिप्न सफल छन् ।
विस्थापन मानिसको मात्र नभई कतिपय पेसाको पनि हुने रहेछ । हुलाकी नामक निकै शक्तिशाली कथामा पौड्यालले औंल्याएका छन् परिवर्तित समय र विज्ञान प्रविधिको विकासले विस्थापित अवस्थामा पुगेको हुलाकीको पीडा । सुलुबुङ गाउँको प्रत्येक घरको राम्रो नराम्रो घटना बोकी ल्याइदिने हुलाकी तीस वर्ष बसेको त्यस गाउँबाट विस्थापित भएको छ आज । हातहातको मोबाइल र इन्टरनेटको एक क्लिकमा सारा संसार थाहा पाइने जमानामा अब हुलाकी केवल एक बुख्याचा भएको छ । आज पनि काठमाडांैका चोकहरूमा कहिले नखोलिने ताल्चा ठोकिएका पत्रमञ्जुषाहरू खडा छन् । ती एक समयका चलायमान बाकस आज मात्र सडकको धूलोले पुरिँदै छ । कुनै दिन अकस्मात ती बाकसहरू गायब भए कुनै आश्चर्य हुने छैन । आजकल धरापमा परेको तर लामो इतिहास बेकेको हुलाक सेवाप्रतिको लेखकको फरक दृष्टि पाठकको मनलाई छुने तरिकाले प्रस्तुत भएको छ । सुलुबुङ छाडेर ओरालो झर्दै गरेको बेनामे हुलाकीले उनीजस्तै अनेकन हुलाकीको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
महेशको कथाको परिवेश निकै फैलिएको छ । उनी कहिले सुलुबुङ कहिले काठमाडांै त कहिले मनिपुरतिर पनि पुर्‍याउँछन् । शीर्ष कथा ‘त्यसपछि फुलेन गोदावरी’ ले युद्धको विद्रूपताको पराकाष्ठा पस्केको छ । एक छापामार, मन, भावना र कोमलताभन्दा पर रही मात्र एक योद्धाको धर्म निर्वाह गर्न बाध्य हुन्छ । नचाहँदा नचाहँदै पनि उसले छिनाउँछ एक जोडी निर्दोष गर्धन । आङ सिरिङ्ग बनाउँछ मनिपुरतिरको युद्ध समयको यस कथाले । जातीय, धार्मिक या अन्य बहानामा भएका नरसंहारका यस्ता घटना मानव सभयताकै लागि आज एक चुनौती भएको छ ।
कथाकार बहुतै कुशल छन् बालमनोविज्ञानसँग खेल्न । यस संग्रहमा धेरै छन् बालबालिकाका कथाहरू । ती कथाहरूमा बिल्कुलै नयाँ विषयहरू नभए पनि त्यसप्रतिको उनको ट्रिटमेन्ट भने नौलो छ ।
बालबालिकाका विषयका कथामध्ये ‘भुवन’, ‘कर्णालीको पल्लो किनार’ जस्ता कथाहरूमा कथाकारले निकै मिहिन ढंगमा बाल मनोदशा चित्रण गर्न सफल भए पनि केही कथामा भेटिने नाटकीयतासाथै सरल सपाट वर्णनले ती कथाहरू केटाकेटीहरूकै लागि मात्रै पो लेखिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ पाठकलाई । ‘अदालतबाहिर’ नामक कथा पढ्दा उनी अझै बालसाहित्यकार प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको भान हुन्छ ।
उनले महिलाको विषयमा उठाउन खोजेको केही कथामा पनि ती महिला पात्रको चित्रणमा न्याय गर्न सकेको देखिँदैन । ‘रश्मि’ नामक कथामा एक शिक्षित स्वावलम्बी एकतीस वर्षीया रश्मिले केही कामबेगरको उन्नाइसवर्षे उरन्ठ्याउले ठिटो कर्णसँग लोग्नेको सुरक्षा खोजेको देखाइन्छ । एक प्रसंगको संवादमा रश्मिले भन्छिन्—
म यहाँ कसैलाई चिन्दिनँ । तिमीले मेरो रक्षा गर्नुपर्छ है । (पृष्ठ १७३)
आसामको घैयाबारी भन्ने गाउँबाट अलि परको बजार डिफुमा आएर आफैंले गरिखाइरहेकी महिलाको यस्तो अस्वाभाविक चित्रणले अझ पनि महिला एक्लै गरिखान सक्दिन, उसलाई पुरुषले नै सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने पुरुषवादी मानसिकता पाइन्छ । खासै ठूलो कारणबेगरै अन्तमा रश्मिले आत्महत्या गरेको पनि देखाइन्छ । सशक्त रूपमा उठाउन सक्ने विषय र पात्र कथा रश्मिमा त्यसै बिलाउँछ ।
महिलाकै विषयको अर्को कथा ‘उनी योगमाया भइन्’ सन्ध्यारानी नामक एक शिक्षित बौद्धिक महिलाको कथा हो जसले आत्महत्या गर्ने घोषणा गर्छिन् । उनी नेपाली मात्र हैन संस्कृत र अंग्रेजीमा पनि दख्खल भएकी एक विदुषी र विद्रोही महिला हुन् । विद्वान्हरूसँग विभिन्न विषयहरूमा धाराप्रवाह बहसमा उत्रन सक्ने ती महिलाले छोराछोरीले उनको चित्त दुखाएको निहुँमा आत्महत्याको बाटो रोज्नु बहुत आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ पाठकलाई । त्यसमा पनि अझ असहज त के लाग्न सक्छ भने उनले मरेको लोग्नेको प्रेममा नै कैयौँ जन्मजन्मको अर्थ खोजेकी छन् । उनीजस्ती एक बौद्धिक र विद्रोही पात्रको मनोदशा चित्रणमा लेखकले न्याय गर्न सकेको देखिँदैन । योगमायाको जलसमाधि विद्रोह थियो या अन्य केही, अझै बहसकै विषय छ । योगमायाकै शैलीमा उर्लंदो गंगामा हाम फाल्ने सन्ध्यारानीको निर्णयप्रति पाठक ‘कन्भिन्स’ हुन सक्ने ठाउँ कम छ ।
उनका पात्रहरू निकै भाग्यवादी र रुढीवादी विचारले ग्रस्त हुनुमा कथाले परम्परावादी दृष्टिकोणकै पृष्ठपोषण गरिरहेझैँ लाग्छ । पूर्वजन्मको फल, ठूलो निधार भएको भाग्यमानी, दैवको साथजस्ता कुराहरू कथामा बारम्बार आइरहनाले ती पात्रहरू आफ्नो कर्ममा भन्दा पनि भाग्यमा बढी विश्वास गर्ने देखिन्छन् । ठाउँ–ठाउँमा प्रयोग भएका ‘पोइ टोकुई’, ‘सन्तान टोकुई’ जस्ता शब्द लैंगिक विभेद र महिलाप्रतिको परम्परावादी समाजको विचारलाई बढावा दिने खालका हुनाले त्यस्ता शब्दहरूको प्रयोगमा पनि लेखक सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । संग्रहका धेरै कथाहरू विस्थापन, निराशा, मानसिक विक्षिप्तता, मृत्यु या आत्महत्यातिर पुगेर टुंगिन्छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २, २०७४ ०९:१९